Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Safety » Ọgbọ ọzọ COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Europe • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ahụike • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • Iwughachi • Safety • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Dr. Garth na-ekwu okwu na WTN Ọgbọ ọzọ COVID-19 pọdkastị
Nje ọhụrụ nke coronavirus - ọgbọ na-esote COVID-19 - apụtala ma bụrụkwa maka mmụba pasent 70 nke ọrịa na London naanị. Ọ dakwara na South Africa. A kewapụrụ UK na ndị ọzọ nke ụwa, na-ejide ịnọ na oke nke ya. European Union (EU), Canada, Israel, na Saudi Arabia akwụsịla ụgbọ elu niile na-aga na UK.
Na Podcast na-adịbeghị anya, Network Tourism Network (WTN) - usoro ohuru nke putara na nwughari. Mkparịta ụka dị egwu nke malitere na March nke afọ a mgbe COVID-19 ghọrọ eziokwu - na-agwa dọkịta na ọkachamara na coronavirus okwu banyere ihe ị ga-atụ anya ya.
Dr. Peter Tarlow si na Safer Tourism kwuru na ruo oge a, anyị chere na anyị amalitela ịhụ ìhè na njedebe nke oghere ahụ na COVID-19, na mgbe ahụ na mberede, mmadụ mechiri ọkụ.
Ọ kọwara na n'oge podcast a, ha na Dr. Garth Morgan bụ ọkachamara n'ọrịa na-efe efe nakwa onye nkuzi ngalaba nke Texas A&M University in Medicine. Agbanyeghi na amatabeghị ihe niile gbasara ụdị nsogbu a, yana ihe ọmụma na nka nke Dr. Morgan, ha ga-agba mbọ ileba anya na ọnọdụ a na-eme na mkparịta ụka kacha mma yana ozi a maara ugbu a.
Anyị kwesịrị ịtụ egwu ụdị nsogbu a? Ọ dị egwu? Anyị na-atụ anya na ọgwụ mgbochi ga-adị ire, mana ugbu a, anyị kwesịrị ịnọ n'ụjọ ma ọ bụ? Gee ntị na pọdkastị ma chọpụta.
World Tourism Network na-ebido n'ime ọnwa Disemba na-amalite na Jenụwarị 1, 2021. Ugbua enwere isi obodo iri na abụọ gburugburu ụwa ruo ugbu a yana otu mkparịta ụka banyere isiokwu dị iche iche. N'ime ọnwa mmalite nke mbụ a, enweela ma ga-aga n'ihu na-enwe nnọkọ na-enye ohere iji mata ndị otu World Tourism Network ma sonye na ịge ntị na mkparịta ụka na-atọ ụtọ na njem. Juergen Thomas Steinmetz, onye guzobere WTN, kesara na ihe omume ndị a nwere ike ịbụ lere anya na nti ebe a.
Iji debanye aha maka nnọkọ na-abịanụ, gaa na: https://wtn.travel/expo/
Banyere Network Tourism Network (WTN)
World Tourism Network (WTN) bu olu ogologo oge nke ulo oru obere na nke nta (SMEs) na njem njem na njem nleta na gburugburu ụwa. Site na ijikota mbo mbo, WTN na ebute ezigbo mkpa na ebumnuche nke ulo oru ndia na ndi otua. Netwọk ahụ na-enye olu maka SMEs na nzukọ ndị njem nlegharị anya yana netwọkụ dị mkpa maka ndị otu ya. Ugbu a, WTN nwere ndị otu 1,000 na mba 124 gburugburu ụwa. Ebumnuche WTN bụ iji nyere SME aka ịgbake mgbe COVID-19 gachara.